मटिहानी नपाका मेयर मण्डललाई मानपदवी प्रदान – Shirish News
महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाका मेयर हरि प्रसाद मण्डल मानपदवीबाट विभूषित हुनुभएको छ ।
आईतवार राष्ट्रपति भवन शितल निवास काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेयर मण्डललाई सु–प्रवल जनसेवा श्रीपदक (तेश्रो) मानपदवी प्रदान गर्नुभएको छ । आफ्नो कार्य क्षेत्रमा अनुकरणिय कार्य गरेको हनाले उहाँलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सो पदक प्रदान गर्नु भएको हो ।
समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री , प्रधानन्यायधिश, मन्त्रीगण लगायत संबैधानिक निकायका प्रमुखहरु उपस्थित रहनु भएको थियो । संविधान दिवसको अवसरमा देशका विभिन्न महानुभावहरुलाई प्रदान गरिने मानपदवी अलङकार पदक अन्तर्गत प्रमुख मण्डल लाई सो मानपदवी पदक प्रदान गरिएको छ ।
यस अघि वि.स. २०६९ सालमा पनि नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाको सभापति हुँदा गणतन्त्र नेपालको तत्कालिन प्रथम राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले प्रवल जनसेवा श्रीपदकबाट मण्डल विभुषित भैसक्नुभएको छ ।
सलहेश फूलबारीमा मेला भर्न आज विहानैदेखि हजारौंको जनमानस ओर्लिए :प्रत्येक वर्षको वैशाख १ गते माला आकारको सेतो फूल फुल्छ